Ideshibhodi Yebhizinisi - Isibonisi Esilula Esibanzi - Isoftware Yezimpawu Zedijithali
I-Metrics & KPI Scoreboard Display yanoma yiliphi ibhizinisi
BONISA IMIPHUMELA YAKHO EBHASINI LAKHO LEBHIZINISI
Gcina iqembu lakho ligxile emgomweni futhi uhlale phezulu ...
Noma ngabe unebhizinisi elincane noma ibhizinisi elikhulu, i-Easy Multi Display ikusiza ukuthi ubonise ideshibhodi yebhizinisi futhi ugcine iqembu lakho ligxile ezinhlosweni zebhizinisi lakho. Khombisa amamethrikhi wakho wokuthengisa, amakhadi wempilo nokuphepha kanye namanye ama-analytics ebhizinisi ngesakhiwo esinengqondo kuthimba lonke.
Esithombeni ngakwesobunxele, ungabona imibiko ehlukene emi-3 yePowerBI. Lokho kusho ukuthi ungahlanganisa amadeshibhodi amaningi esikrinini esifanayo.
Xhumana nathi namuhla ukudingida izidingo zakho bese uqala ukuthola izinzuzo zokukhangisa ibhizinisi lakho ngesoftware ebiza kakhulu futhi elula kakhulu yemultimedia emakethe.
Thuthukisa ukudluliswa kolwazi!
Lungiselela amadeshibhodi amaningi njengoba ufuna futhi uwashintshe ngokuchofoza okukodwa! Shintsha kalula kusuka ku- ideshibhodi yezimali kuya ideshibhodi yezentengiso.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka futhi, ngokuchofoza okukodwa, ukufihla yonke imininingwane yakho eyimfihlo futhi ngaleyo ndlela uvikele idatha yakho! Umsebenzi wethu "wesilawuli kude" usebenza kahle nalobu buchwepheshe obusha obenzelwe izidingo zakho!
Ekugcineni, uzokwazi ukufinyelela kukho konke ukucushwa okwenziwe ngaphambilini ku-Easy Multi Display!
Isithonjana sokunciphisa noma ukukhulisa ideshibhodi yakho
Isilawuli kude se-Easy Multi Display
KUNGANI USEBENZISA KAKHULU IMULTI BONISELA IBHASI LAKHO LEBHIZINISI?
HLALELA KU-TRACK - HIT TARGETS YAKHO
Ngamamethrikhi akho nesibonisi seKPI ku- ideshibhodi yebhizinisi nge-EMD, uzokhunjuzwa ngezinjongo zakho zebhizinisi ezibaluleke kakhulu futhi uzokwazi ukunquma isenzo esifanele okufanele usithathe usuku ngalunye.
QHAQHA ISITOLO SAKHO
Ukuthi iqembu liphumelela umqhudelwano noma lilwela ukuqhubeka nalo, ukubonisa amaqembu akho ethuthukela emgomweni kuwasiza ukuba agxile futhi abe nomdlandla. Khombisa imiklomelo yokuqashelwa eduze kwamadeshibhodi akho ngesisusa esengeziwe esengeziwe!
QHUBEKA UKUXHUMANA NAYE
Uyakwazi abakushoyo - emehlweni, ngaphandle kwengqondo. Ukunikeza iqembu lakho ukubheka obala ukusebenza kwamaqembu abo kubanikeza ithuba lokuzizwa bebandakanyekile nengxenye yeqembu!
Ungenza ukubuka kwekhasi okugcwele engxenyeni ngayinye yokuhlukaniswa kwakho kwe-TV. Lokhu kukhonjiswa okuningi.
Ku-Virtual Cockpit engezansi, isoftware yethu inhlanganisela yokubonisa okuningi I-PowerBI futhi I-MicroStruzzle amadeshobhodi ukuthuthukisa ukwenza kwakho izinqumo. Kukhona ukuqonda okubonakalayo kweMicroStr Strategy ngakwesobunxele nakwimibiko ye-PowerBI ngakwesokudla. I-cental TV ihlukaniswe phakathi kweMicroStr Strategy nePowerBI
IZINDABA Ehlobo 2021
"Umphathi wedeshibhodi”Isici sokwenza ideskithophu yakho isikhungo somyalo. Nge-EMD ungahlukanisa umqaphi wakho wesibili ezindaweni eziningi. Khetha imibiko ehlukene iPowerBI, iMicroStrource, iQlik, iTableau.
Imfihlo yenziwa ngokuchofoza okulula endaweni yakho yesaziso. Khombisa noma ungabonisi, chofoza okukodwa kuphela.
Sebenzisa irimothi endaweni yesaziso ukushintsha ngokuphelele amawindi akho, ukusuka ekubikeni kwezezimali kuye ekubikeni ezentengiselwano.
Ekugcineni, ungena esikhungweni sakho somyalo yonke imininingwane yenkampani yakho.
Ngenxa yokubukwa kwethu kwe-EMD, sazisa amakhasimende ethu ngemikhiqizo ehlukahlukene yomshuwalense esiyinikezayo. Ikhathalogu lemikhiqizo yethu iya iba likhulu futhi kwesinye isikhathi kube nzima ukuyiqonda. Ngokuhlolisisa i-ejensi yami ku-EMD, amakhasimende atholakala kangcono ngemikhiqizo namasevisi wethu.
Umshuwalense Wezinsizakalo, Namur
- Ukukhethwa kolimi: isiNgisi, isiFulentshi, iSpanishi, isiShayina, isiDashi kuyaqhubeka ...